माथिल्लो तामाकोशीले आगामी बिहिबारदेखि आम्दानी गर्न थाल्ने
२ महिनाभित्र होङ्शी सिमेन्टलाई विद्युत दिने!
देशभित्रै विद्युत् खपत गर्ने यस्तो छ प्राधिकरणको तयारी, होङ्शी सिमेन्टलाई तीन महिनाभित्रमा विद्युत्!
प्रकाशित मिति : सोम, भदौ २१, २०७८
काठमाडौं, भदौ । दोलखा जिल्लामा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोशीले हिजो आइतबारदेखि पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन थालेको हो ।
आयोजनाका ६ वटै टर्बाइनबाट हिजोदेखि उत्पादन शुरु गरिएता पनि विद्युत प्राधिकरणले भने बिहिबारदेखि विद्युत खरिद वापतको भुक्तानी दिने छ । अहिले वर्षातको समय भएकोले आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ तर हिउँदमा पानीको बहाव कम हुने भएकोले आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न नसकिने कम्पनीले जनाइएको छ । आयोजनाको परीक्षणका लागि पहिलोपटक बैशाख १६ गते सुरुङमार्गमा पानी हालेर सुरु गरिएको थियो ।
तर तल्लो भर्टिकल (२७३ मिटर) र माथिल्लो भर्टिकल (३१० मिटर) जोड्ने तेस्रो भागको पेनस्टक पाइपमा बनाइएको ुम्यानहोलु को बिर्कोबाट पानी चुहिएपछि परीक्षण रोकियो । पेनस्टकमा कुनै समस्या आए भित्र गएर मर्मत गर्न म्यानहोल बनाइएको हुन्छ ।
त्यसपछि दोस्रो अडिट टनेलबाट पानी चुहिएर केहि समय परीक्षण रोकियो । आयोजनाले असार २१ गते पहिलो युनिटबाट उत्पादन सुरु गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर भर्चुअल उद्घाटन गरेसंगै पहिलो युनिट (७६ मेगावाट) उत्पादन सुरु गरिएको थियो ।
चैतमा नै पहिलो युनिटबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । तर विभिन्न समस्या आएका कारण उत्पादन मिति धकेलियो । २०६८ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७२ निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो ।
निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने वर्ष आएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामाग्री अभाव, ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका विविध कारणले ढिला भएको आयोजनाले जनाएको छ।
लट २ को ठेक्का भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याको रेल एण्ड इन्जिनियरिङले पाएको थियो। कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण बाँधका पेनस्टक पाइपलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरणहरु उत्पादन र जडानमा ढिलो भइ आयोजनाको समग्र निर्माण कार्यमै ढिलाइ भएको हो। उक्त ठेक्का वित्तीय भार नपर्ने गरी इलेक्ट्रोमेकानिकल (लट ३) को ठेकदारलाई दिएर सम्पन्न गरिएको हो ।
सो आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब २८ करोड १० लाख युनिट विद्युत बिक्री गर्ने छ भने त्यस वापत ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी आयोजनाले गर्नेछ । उत्तरी दोलखाको लामबगरमा रहेको विद्युत गृहबाट खिम्ती सबस्टेसन मार्फत विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको छ । नेपाली लगानी र सीपबाट बनेको आयोजना निर्माणका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ ।
तुलसीपुर ७ असोज । दाङको ५६ हजार हेक्ट 19 hours ago
सङ्खुवासभा, असोज । ऊर्जा जलस्रोत तथा 22 hours ago
राजनीतिको थिति, विकासमा विकृति
काठमाडौं असोज । ‘मेरो सातौ पुस्ता द 1 day ago